Karim Benzema Oo Ka Sheekeeyay Kulan Hal Saacad Qaatay Oo Uu Jose Mourinho La Yeeshay Iyo Arin Qariib Ah Oo Ay Ka Wada Hadleen. – WWW.Gool24.net
Karim Benzema Oo Ka Sheekeeyay Kulan Hal Saacad Qaatay Oo Uu Jose Mourinho La Yeeshay Iyo Arin Qariib Ah Oo Ay Ka Wada Hadleen.
Xidiga xulka qaranka France iyo kooxda Real Madrid ee Karim Benzema ayaa ka sheekeeyay kulan hal saacad qaatay oo ay Jose Mourinho wada qaateen isaga oo waliba faah faahin ka bixiyay arin qariib ah oo uu macalinka ree Portugal kala hadlayay. Karim Benzema ayaa ahaa xidigihii ugu muhiimsanaa ee uu Jose Mourinho kula soo shaqeeyay Santiago Bernabeu ee waqtigii uu Real Madrid maamulayay.
Karim Benzema ayaa sheegay in Jose Mourinho uu ka dalbaday in uu kulan khaas ah la qaato si uu ugu sheego hadalo uu ka cadhooday oo uu Mourinho isaga ka sheegay. Waqtiga uu kulankani dhex maray Jose Mourinho iyo Karim Benzema ayaa ahaa intii ay wada joogeen kooxda Real Madrid.
Karim Benzema ayaa shaaciyay in uu si wayn uga cadhooday hadalo uu Mourinho uu isaga ka sheegay oo ahaa matalaad uu weerarka Benzema ka sameeyay oo ahaa sidii bisas ama mukulaal jiir ama dooli baacsanaysa oo kale taas oo Benzema cadho ku abuurtay.
Karim Benzema ayaa sheegay in Mourinho uu ka dalbaday in uu ciyaartoy ahaan ixtiraam ugu muujiyo isla markaana uu isaguna ka tababare ahaan u ixtiraamayo balse aanu ogolayn in uu erayo aan haboonayn uu isaga u adeegsado, waana sababta qariiba ahayd ee Mourinho iyo Benzema ay saacada kulanka gaarka ah u qaateen si arintan loo xaliyo.
Karim Benzema oo sidii aanu idiin soo gudbinay bixiyay waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya oo uu siiyay Canal+ ayaa dib u xusuustay wixii Jose Mourinho soo kala maray iyo qaabkii uu cadhada wayn uga muujiyay hadalo uu Mourinho isaga ka sheegay.
Benzema oo ka jawaabayay xidhiidhka uu la lahaa Mourinho ayaa yidhi: ” Waxaanu lahayn xidhiidh fiican laakiin waxa uu isagu bilaabay in uu sheego hadalo meesha ka baxsanaa, waxa uu dareemay isagu in ay ahaayeen hadalo maad ama wax lagu qoslo ah balse xaqiidu waxay ahayd in haddii uu ahaa qof aan ixtiraamayo, kadib waqtigaas waan ka cadhooday”.
Intaa kadib Benzema ayaa ka hadlay kulankii uu Mourinho balanta kaga samystay iyo wixii uu kala hadlay isaga oo waliba cadho dareemayay wuxuuna yidhi: ” Waxaan isaga u sheegay in ay jiraan waxyaabo aanu u baahanahay in aanu ka wada hadalno, waxaanu qaadanay kulan hal saac ah”.
Benzema oo kala cadaynaya erayadii uu Mourinho u sheegay ayaa yidhi: ” Waxaan isaga u sheegay: ‘ Waxaan ahay ciyaartoy, adiguna waxaad tahay tababarahaygii isla markaana anigu waan ku ixtiraamaa laakiin adigana waxaa waajib kugu ah in aad aniga sidoo kale ii xitiraamto ka ciyaartoy ahaan'”.
Benzema ayaa cadeeyay in markii uu Mourinho kulankan la qaatay in uu u sheegay in haddii uu markale ku celiyo erayo aan isaga ku haboonayn uu isna jawaab ka bixin doono wuxuuna yidhi: ” Kadib taas may jirin wax sheeko dheeraad ahi oo la xidhiidha bisado/mukulaal, Ey ama wax kale”.
Ugu danbay Benzema ayaa hadalkiisa ku soo xidhay: “Laga yaabee in aan cabsanayay laakiin haddii aad doonayso in aad aniga igu qosasho kadib aniguna waan ka jawaabi doonaa. Marka aad waxyaabaha ka hadasho kadib way sii fiicnaanaysaa”.